Ihe ị ga -ahụ na Picos de Europa: ihe ịtụnanya ebumpụta ụwa na obodo mara mma | Akụkọ njem
Kwuo maka ihe ị ga -ahụ na Picos de Europa ọ bụ ime ya site n'ọdịdị okike mara mma, obodo juputara na amara na ụzọ ugwu dị egwu. Ihe a niile bara ụba nke ukwuu na oke ugwu nke na ọ na -esiri anyị ike ịhazi ya maka gị.
N'ịbụ nke Ugwu Cantabrian, Picos de Europa bụ nnukwu limestone guzobere nke na -esite na mpaghara León, Cantabria na Asturias. N'otu aka ahụ, a na -etinye ọtụtụ n'ime ebe ya n'ime Ogige Ntụrụndụ Picos de Europa, nke bụ nke abụọ a na -eletakarị na Spain ka Teide, n'agwaetiti Tenerife (ebe a ka anyị hapụrụ gị akụkọ gbasara ogige Canarian a).
1 Ihe ị ga -eleta na Picos de Europa: Site na ọmarịcha gorges ruo obodo ọdịnala
1.1 Covadonga na ọdọ mmiri
1.2 Poncebos na Garganta del Cares, ihe ịtụnanya ọzọ
1.3 Bulnes na Urriellu
1.4 Ọdọ mmiri Hermida
1.5 Ebe obibi ndị mọnk nke Santo Toribio de Liébana
1.6 Potes, ihe ịtụnanya ọzọ ịhụ na Picos de Europa
1.7 Isi mmalite nke
Ihe ị ga -eleta na Picos de Europa: Site na ọmarịcha gorges ruo obodo ọdịnala
Emebere Picos de Europa nke nwere oke atọ: nke ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ Andara, etiti ma ọ bụ ndị Urrieles na ọdịda anyanwụ ma ọ bụ Cornion. Anyị enweghị ike ịgwa gị nke mara mma, mana anyị nwere ike ịgwa gị maka nleta dị mkpa ị ga -eme na ha niile. Ka anyị hụ ha.
Covadonga na ọdọ mmiri
Ebe Royal nke Covadonga
Ọ bụrụ na ịnweta Picos de Europa site Cangas de Onís, isi obodo nke alaeze Asturias ruo n'afọ 774, ị ga -erute n'ugwu Covadonga, ebe ofufe maka ndị kwere ekwe na nleta a na -apụghị izere ezere maka ndị na -esiteghị na akụkọ ifo na akụkọ ihe mere eme.
Na nnukwu esplanade, ị ga -ahụ Basilica nke Santa María la Real de Covadonga, owuwu nke narị afọ nke XNUMX nke nọchiri anya ụlọ ụka ochie e ji osisi rụọ. Na kwa ya Ebe obibi ndị mọnk nke San Pedro, nke bụ ihe ncheta akụkọ ihe mere eme-nka na nke ka na-echekwa ihe ndị Rom. N'akụkụ nke ya, Royal Collegiate Church nke San Fernando Ọ sitere na narị afọ nke XNUMX na ihe oyiyi ọla kọchara mezuru ya Pelayo, obelisk ya na Cruz de la Victoria, akara Asturias, na nke a na-akpọ "Campanona", nke ịdị elu ya dị mita atọ na kilogram 4000.
Mana, ọkachasị maka ndị kwere ekwe, nleta na Ọgba dị nsọ, ebe ọnụ ọgụgụ nke Nwa agbọghọ nke Covadonga na ili e chere na Pelayo n'onwe ya. N'ịga n'ihu na ọdịnala, a na -ekwu na Goth gbabara ebe a na ndị ọbịa ya n'oge Agha Covadonga.
Mgbe ị gara na mpaghara a mara mma, ị nwere ike gbagoo n'ọdọ mmiri, nke dị naanị kilomita iri na abụọ. Karịsịa, e nwere abụọ, Ercina na Enol ha nọkwa na gburugburu okike dị ebube nke ugwu na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ị nwere ike jiri ụgbọ ala rute ha (na -agaghị emeli ya) ma ọ bụ site n'okporo ụzọ njem dị ebube.
Poncebos na Garganta del Cares, ihe ịtụnanya ọzọ
Na -elekọta ọmarịcha
Poncebos bụ obere obodo ugwu dị na kansụl Cabrales nke ị ga -esite na mpaghara dị egwu. O juputara na ịma mma, mana isi ya bụ na ọ dị n'otu njedebe nke Utezọ nke Cares.
Njegharị a na -ejikọ gị Ken, na mpaghara León, ma nwee ogologo ihe dị ka kilomita 22. A na -akpọkwa ya Akpịrị Chukwu n'ihi na ọ na -agba n'etiti nnukwu mgbidi limestone, o nwere ngalaba nke aka mmadụ kere.
N'iji ohere mbuze nke osimiri Cares mepụtara, na mbido narị afọ nke XNUMX, e gwupụtara akụkụ nke nkume ahụ iji rite akụ na ụba mmiri nke osisi Camarmeña. Ihe si na ya pụta bụ ụzọ mkpagharị dị egwu nke na ọ so na ndị kacha maa mma n'ụwa.
Agbanyeghị, ị ga -eburu n'uche na ọ bụ ụzọ ahịrị, ọ bụghị nke okirikiri. Nke a pụtara na, ọ bụrụ na ịmalite ya na Poncebos wee hụ ka ike gwụchara gị, ị ga -enwe naanị nhọrọ abụọ: ịlaghachi n'obodo a ma ọ bụ gaa Caín. Na agbanyeghị, njegharị ahụ dị ebube.
N'etiti ebe ị ga -ahụ ma ị mee ya, anyị ga -ekwupụta dịka ọmụmaatụ Murallón de Amuesa ma ọ bụ Olu olu ọnya. Mana, naanị otu kilomita site na Poncebos, ị ga -ahụ Bulnes dị egwu, nke na -akpọga anyị ebe ọzọ ịhụ na Picos de Europa.
Bulnes na Urriellu
Railway rack ma ọ bụ funicular na -akpọga gị n'obodo mara mma nke Bulnes, n'agbanyeghị na ị nwekwara ike rute ebe ahụ site n'okporo ụzọ Ọwa Texu. N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ị bịarutere n'obodo a mara mma, ihe ngosi okike pụrụ iche ga -emeghe n'ihu gị.
Ị ga -ahụ onwe gị ka ọnụ ọnụ ugwu gbara ya gburugburu nke yiri ka ọ ga -amakụ gị na gburugburu ihe ùgwù ebe ọ dị ka ọgbara ọhụrụ abịabeghị. Ma, ị ga -ahụkwa ụlọ ndị a haziri okwute na haziri n'okporo ụzọ awara awara. Ọ bụrụ na, na mgbakwunye, ị na -aga n'elu Uptown, echiche ga -adị ọbụna egwu.
Dị ka a ga -asị na ihe a niile ezughị, Bulnes bụ otu n'ime ụzọ mbata Ugwu Urriellu, nke a maara dị ka Naranjo de Bulnes maka ngosipụta dị egwu anyanwụ na -eme n'ugwu a. Ị nwere ike mee njem mkpagharị gaa ebe mgbaba na, ozugbo ebe ahụ, ọ bụrụ na -amasị gị ịrị, rịgoro n'elu, ebe o nwere ọtụtụ ụzọ ime ya.
Mana ụzọ njem ndị ọzọ na -amalite site na Bulnes. N'ime ha, ndị na -akpọga gị na Pandébano Kọlnwere Sotres ee Isi mmalite nke. Banyere nke ikpeazụ, anyị ga -ekwu maka ya ma emechaa.
Ọdọ mmiri Hermida
Desfiladero de la Hermida Ruo ugbu a, anyị agwala gị gbasara ọmarịcha ebe na mpaghara Asturia nke Picos de Europa. Mana Cantabrian adịghị anya n'azụ n'ihe gbasara gburugburu ebe obibi na ebe jupụtara na amara ọdịnala.
Ezigbo ihe akaebe nke a bụ ọwa mmiri Hermida, nke na -aga kilomita 21 n'etiti nnukwu okwute na n'akụkụ mmiri. osimiri deva. N'ezie, ọ bụ nke kachasị ogologo na Spain niile. Ọ nwere mpaghara karịrị hectare puku isii nke ekepụtara dịka Mpaghara Nchedo Pụrụ Iche maka Nnụnnụ.
Mana nnukwu ọmarịcha Hermida dịkwa mkpa maka ihe ọzọ. Ọ bụ naanị ụzọ ịnweta site n'ụsọ osimiri gaa mara mma Mpaghara Liébana, nke ị ga -ahụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị ga -ahụ na Picos de Europa. Anyị ga -egosi gị ụfọdụ n'ime ha.
Emi odude ke obio Lebaniego de Chameleno, nnukwu ebe obibi ndị mọnk a bụ ebe njem, dị ka ọ dị na Santiago de Compostela (ebe a anyị na -ahapụrụ gị akụkọ gbasara ihe ihu na obodo a). Dị ka katidral Galician, o nwere Ọnụ ụzọ mgbaghara ọ bụkwa ihe ncheta mba kemgbe 1953.
Ọ bụrụ na anyị ga -a attentiona ntị na ọdịnala, Toribio, bishọp Astorga hiwere ya na narị afọ nke ise. Mana nke dị mkpa nye ndị kwere ekwe bụ na ọ nwere ụlọ Lignum Crucis, otu obe nke a kpọgburu Jisus Kraịst n'elu ya. Ọzọkwa na ngosipụta ụfọdụ ọrụ ndị ama ama Beatus nke Liebana.
N'aka nke ọzọ, ebe obibi ndị mọnk ahụ bụ isi ihe owuwu nke mechara Ọgba dị nsọ, nke ụdị ndị Rom oge ochie; ụlọ nsọ nke San Juan de la Casería na San Miguel, site na narị afọ nke XNUMX na XNUMX n'otu n'otu, na mkpọmkpọ ebe nsọ nke Santa Catalina.
Potes, ihe ịtụnanya ọzọ ịhụ na Picos de Europa
Ọ dị nso na ebe obibi ndị mọnk Santo Toribio de Liébana bụ obodo Potes, obodo mara mma nke nwere ụdị akụkọ ihe mere eme ma bụrụ isi obodo mpaghara Liébana.
Otu n'ime ihe na -adọrọ mmasị ya bụ okporo ụzọ dị warara na mkpọmkpọ ebe. N'ime ha niile, ị ga -ahụ ụlọ ndị ama ama na mpaghara ahụ, ọkachasị na Obodo Solana. Àkwà mmiri ndị dị ka San Cayetano na La Cárcel ga -adọtakwa mmasị gị.
Mana nnukwu akara Potes bụ Towerlọ elu Infantado, onye ihe owuwu ya malitere na narị afọ nke XNUMX, n'agbanyeghị na onyonyo ọ na -enye anyị taa bụ maka nhazigharị narị afọ nke XNUMX nke nyere ya ihe ndị Italiantali. Dịka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga -agwa gị na ọ bụ manor nke Marquis nke Santillana, onye Spain na -ede uri ochie.
I kwesịkwara ileta na Potes the chọọchị nke San Vicente, onye owuwu ya mere n'etiti narị afọ nke iri na anọ na nke iri na asatọ na nke, ya mere, na -agwakọta ihe ndị Gothic, Renaissance na Baroque.
Isi mmalite nke
Anyị mechiri njem anyị na Picos de Europa site n'ịgwa gị gbasara obere obodo a na obodo Camaleño. Ọ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị mita asatọ n'ịdị elu na, iji ruo ya, ị nwere ike iji ọmarịcha ihe Cableway ọ na -ewe naanị nkeji atọ iji mee njem ahụ.
Na Fuente Dé ị nwere mmasị echiche nke na -enye gị echiche mara mma banyere ugwu na ndagwurugwu dị nso. Mana ị nwekwara ike rute n'obodo ahụ site na ịgagharị n'okporo ụzọ nke nwekwara ọmarịcha ala. N'ime ha, anyị ga -ekwu maka ya ịrị elu na Alto de la Triguera, sekit gburugburu Ọkwa Remonta ma ọ bụ ihe a na-akpọ okporo ụzọ Áliva na ọdụ ụgbọ mmiri Pembes.
Na mmechi, anyị egosila gị ụfọdụ ihe ịtụnanya nke Picos de Europa. Agbanyeghị, dị ka anyị gwara gị, enwere ọtụtụ ndị ọzọ anyị ga -ahapụrịrị na pipeline. N'etiti ha, obodo nke Arenas de Cabrales, na Asturias, ya na ọmarịcha ihe owuwu ụlọ na obí eze dịka Mestas na Cossío; dị oke ọnụ ahịa Ọdịdị nke Beyos, nke na -egosi ụzọ osimiri Sella ma kewaa oke osimiri ọdịda anyanwụ na oke ugwu Cantabrian, ma ọ bụ Ọnụ ọgụgụ kasị elu nke Torrecerredo, nke kachasị elu na Picos de Europa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Ihe ị ga-ahụ na Picos de Europa